Isijapani abafazi ukusuka matriarchal septemba ezama abantu Brazil-Intanethi - news-Brazil
Isijapani abafazi ukusuka matriarchal septemba ezama abantu Brazil-Intanethi – news-Brazil
Abafazi ukususela Isijapani isixeko Noiva ingaba Cordeiro wacebisa ukuba omnye abantu ukusuka zonke phezu kwehlabathi ukusa kwi naye. Le incinci town ngu ezaziwayo ngenxa yokuba ngayo ubomi babo ngendlela largely ibhinqa abantu behlabathi – ngakumbi abantu iphelelwe amabini ukuba amathathu anesihlanu. Resident Noiva ingaba Cordeiro kugqitywe hayi ukulinda kuba izipho elimfiliba, kwaye ukukhangela bridegrooms. Lo mnqweno enye ngabo waxelela kwi-cofa kwi isixeko iphepha kwi-Facebook, ngexesha egxininisa ukuba inzala kwabo kuphela bachelors abo wouldn ukuba ingqondo a matriarchal indlela ubomi.
Abanye abafazi Noiva ingaba Cordeiro kuba abantwana kwaye husbands, kodwa baye emsebenzini ngaphandle isixeko kwaye kuphela ngamanye amaxesha kufika ekhaya. Xa omnye girls ingaba kwalelwe enye oonyana babantu watshata ladies, njengoko inzala iintsapho ezininzi kuba ixesha elide enxulumene ties ka-kinship. Cofa u-girls Noiva ingaba Cordeiro wathi ukuze babe sele kissed, hayi nje phupha malunga, ukuwa ngothando kwaye enye. Unxulumano lwefowuni omnye Isijapani ladies kuba sele yaphendula ukuba indoda kwi-Brazil, i-India, Eyiputa, China, USA ne nakumanye amazwe.
Brazilians musa hurry kwi-Noiva ingaba Cordeiro
Noiva ingaba Cordeiro aguqulele ukusuka isiphuthukezi njengoko”bride Cordeiro”. Ngokubhekiselele loomama septemba waba kwi-Mariya Senorina de Lima emva kwayo cheating umyeni, wayengomnye banyanzeleka ukuba ushiye usapho. Kuba committing umthetho wayengomnye excommunicated ukusuka Nebandla kwaye betrayed yakhe uhlobo anathema kwiphawa kwisizukulwana
← Fun kwi-Germany
Ividiyo: njani ukuba ahlangane a guy kwi-videochat →